कोरोनाभाइरसले गला र फोक्सो मात्र नभई दिमागलाई पनि असर पार्ने गरेको देखिएको छ । संसारभरिका न्युरोलोजिस्टले यसलाई पुष्टि गरिरहेका छन् ।
उनीहरूका अनुसार, कुनै कुनै रोगीहरूलाई मस्तिष्कसम्बन्धी रोग लागेको छ । त्यस्ता रोगीको दिमाग सुन्निने, दिमागमा रगत जम्ने र बोल्ने क्षमता गुम्ने लक्षण देखिएका छन् ।
त्यसो त कोरोनाको मुख्य लक्षण ज्वरो, खोकी र सास फेर्न समस्या आउनु हो । तर केही रोगीमा चाहिँ ब्रेन डिस्फंक्सनको समस्या देखिएको छ । त्यसले गर्दा रोगीहरू सुँघ्न र स्वाद चिन्न पनि सकिरहेका छैनन् । अनि मुटुरोग पनि यसले बल्झाइरहेको छ ।
मार्च महिनाको शुरूतिर ७४ वर्षीय एक रोगीलाई खोकी र ज्वरो आएपछि आकस्मिक कक्ष लगियो । उनको एक्सरे गर्दा निमोनिया भएको कुरा आयो र उपचारपछि घर पठाइयो ।
घर आएको भोलिपल्ट रोगीलाई फेरि चर्को ज्वरो आयो । अनि उसका परिवारका सदस्यले फेरि अस्पताल लगे । अचानक रोगीलाई सास फेर्नै समस्या भयो । स्वास्थ्य बिग्रिएर रोगीले डाक्टरलाई आफ्नो नाम समेत बताउन सकेनन् । उनले बोल्ने क्षमता गुमाए ।
ती रोगीलाई फोक्सोको समस्या थियो र पार्किन्सन्सको पनि । पछि उनले हातगोडा चलाउन पनि सकेनन् र मिर्गी लागेको देखियो । उनको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा कोरोना पाइयो ।
इटली तथा अन्य देशका चिकित्सकले कोरोना संक्रमितलाई मस्तिष्क रोग पनि लागेको पाए । इटलीमा त्यस्ता रोगीका लागि फरक न्युरो कोभिड इकाइ शुरू गरिएको छ ।
पिट्सबर्ग विश्वविद्यालयका न्युरोलोजिस्ट डा शेरी चोउका अनुसार, मस्तिष्क रोगका लक्षणको जानकारी लिने प्रयास बढाइएको छ । फोक्सोमा समस्या हुँदा भेन्टिलेटरमा राखिने भए पनि दिमागमा समस्या हुँदा राख्ने भेन्टिलेटर नभएको उनले बताए ।
उता चिनियाँ शोधकर्ताहरूले हालै प्रकाशित गरेको एक अध्ययन निष्कर्षमा कोरोनाभाइरस श्वासनलीमा मात्र सीमित नरही स्नायु प्रणालीसम्म पनि पुगिसकेको उल्लेख छ । फेब्रुअरी महिनामा चीनमा कोरोना संक्रमितमा मानसिक रोगको लक्षण पनि भेटिएको अध्ययनमा लेखिएको छ ।
पिपलको पातले यी ५ गम्भीर रोगका लागि औषधिको काम गर्छ
मनतातो पानीमा मरिच हालेर पिउनुका फाइदा
कब्जियतबाट आराम पाउन के गर्ने
दिनदिनै पाखुरा सुर्केर इरिटेट भइसक्यो- बाँस्कोटा, लडाईं ओली होइन ओलीप्रवृत्ति विरुद्ध- दाहाल
नेकपामा मञ्चित नाटकको अन्तर्य : हामी सधैं प्रयोगशाला मात्र बन्ने हो ?
कात्तिक २४, २०७७
प्रचण्डको बुई चढेर शक्ति आर्जन गरेकाहरू उनलाई अप्ठ्यारो पर्दा किन चुपचाप ?
विपद् कोषबाट जनप्रतिनिधिलाई भत्ता
एनआइसी एशिया बैंकका ग्राहकले सामग्री तथा सेवाहरूको खरिद रकम मासिक किस्ताबन्दीमा रुपान्तरण गर्न सक्ने
नेपाल मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव
केही काम नपाएका मान्छेले सरकार परिवर्तनको हल्ला चलाइरहेका छन् : प्रधानमन्त्री ओली
हर्ट अट्याक किन हुन्छ ? यी हुन् हर्टअट्याक हुने पाँच कारण